Miara-mizaka… | NewsMada
Nitohy, omaly, ny tsy fahatomombana teo amin’ny fanatanterahana ny fanadinana bakalorea. Mitaintaina sy mikorontan-tsaina ireo ankizy miatrika izany, be loatra ny tsy milamina ka miara-mizaka izany amin’ireo fositra nipoiran’ny tsy fahatomombanana ireo ankizy tanora malagasy manala ny fanadinana bakalorea. Miara-mizaka na tsy tompon’andraikitra aza.
Tranga niseho, omaly ny fahataran’ny fanombohan’ny fanadinana ho an’ny taranja frantsay, tany Antsirabe sy ny foibem-pampianarana vitsivitsy teto an-dRenivohitra. Tara ny fahatongavan’ny laza adina ka nihemotra ho ora 2 ny fanombohana tany Antsirabe, raha toa ka tara ora iray izany ho an’ny teto Antananarivo. Tsiahivina fa tokony ho tamin’ny 7 ora sy sasany maraina no nanomboka izany fanadinana ho an’ny taranja frantsay izany. Tara niaraka tamin’izay ihany koa mazava ho azy ny firavana ho an’ny tapany maraina, satria tamin’ny 1 ora vao tapitra ny Frantsay. Dia miara-mizaka izay tsy fahatomombanana izay hatrany ireo mpiadina fa tsy misy azon’izy ireo hatao, tsisy fialan-tsasatra fa dia avy hatrany dia nikatroka indray.
Lasa vinany sy tsy mitombin-tsaina intsony ireo mpianatra, hoe hanao ahoana ny vokatra amin’izao fikorontanana izao ? Tsisy ninoninona azo atao anefa fa dia tsy maintsy hiara-hizaka izay mety ho vokatra hisy eo, ireto tanora ho avin’ny firenena ireto, na ho tsara na ho ratsy izany.
Etsy an-daniny, mitaintaina miaraka amin-janany ihany koa ireo ray aman-dreny, indrindra fa niova indray izao ny datin’ny fidiran’ny mpianatra, ka raha sanatria tsy ho afaka dia hanao ahoana ny mety ho fiantraikany, tsy maintsy avy hatrany dia hiverina hianatra indray mantsy fa tsy misy akory fialan-tsasatra. Ny vola sy fotoana lany manampy izany, fa dia tsy misy azo atao, miandry izay vokany ary miara-mizaka izany avokoa na ny ray aman-dreny na ny mpiadina. Miara-mizaka izay vokany eo !!!